Shandisa Aya Matipi uye Zvishandiso Kukunda Yako Kushambadzira Basa Rakawanda | Martech Zone
Kana iwe uchida kunyatsogadzirisa rako rekushambadzira rebasa, iwe unofanirwa kuita basa riri nani rekuronga zuva rako, kuongororazve netiweki yako, kukudziridza hutano hutano, uye kutora mukana wezvikwata zvinogona kubatsira.
Tora Tekinoroji Inokubatsira Iwe Kutarisa
Nekuti ini ndiri tekinoroji mukomana, ini ndichatanga nazvo. Handina chokwadi nezvandaizoita ndisina Brightpod, iyo sisitimu yandinoshandisa kuisa pamberi mabasa, kuunganidza mabasa kuita zviitiko zvikuru, uye kuita kuti vatengi vangu vazive kufambira mberi kuri kuita zvikwata zvedu. Chikamu chekupedzisira chakakosha - ini ndagara ndaona kuti kana vatengi vaona mamiriro azvino emapurojekiti uye kumashure kumashure zvichionekwa, vanowanzo dududza pane zvimwe zvikumbiro. Pamusoro pezvo, zvinondipa mukana unoshamisa kana nyaya dzekurumidziro dzamuka kuti ndishande nevatengi vangu kuti vasunge here kana vachida kuwedzera bhajeti kuti vazvigadzirise, kana kuti tinoshandura zvinokosheswa todzokera kumashure mazuva akakodzera pane zvimwe zvinopihwa.
Pamwe nekutungamira kweprojekti, karenda manejimendi agara achitsoropodza. Ini handina misangano yemangwanani (verenga nezve izvi gare gare) uye ini ndinogumira misangano yangu yekubatanidza kune rimwe zuva pasvondo. Ndinoda kusangana nevanhu, asi nguva dzese pandinenge ndichizunza maoko… zvinowanzoendesa kune rimwe basa mundiro yangu. Kudzvinyirira karenda yangu kwave kwakakosha mukuhwina nguva yekumashure kuti basa rekutsvaga mari ripere.
Shandisa kuronga mafomu kutaurirana uye nekuisa nguva dzemisangano. Iko kumashure nekubuda kweakarenda maemail ndiko kutambisa nguva iwe zvausingazode futi. Ndine imwe yakavakirwa mune yangu saiti chat chat pamwe vasakukurwa.
Pedzisa Yako Akawanda Akaoma Mabasa muMangwanani
Ndaiwanzo kutarisa email yangu mangwanani ega ega. Nehurombo, kuyerera hakuna kumbomira zuva rese. Wedzera mafoni uye misangano yakarongwa, uye ndinowanzo shamisika kana ndichiwana chero chinhu chakaitwa zuva rese. Ini ndinenge ndave kupisa mafuta epakati pehusiku kuyedza kubata uye kugadzirira zuva rinotevera. Ini kubvira ndadzosera zuva rangu - kushanda paemail uye voicemail chete mushure mekunge ndapedza akakosha mabasa ezuva racho.
Dzidzo dzakawanda dzakaratidza kuti vanhu vanofanirwa kuyedza kuita makuru mabasa mangwanani. Nekushandisa zano iri, vatengesi vanogona kutarisisa kutarisa kwavo uye kubvisa zvinokanganisa (ini ndinowanzo shanda kubva kumba mangwanani nefoni yangu neemail zvakadzimwa). Fambisa ako madiki mabasa mushure me1: 30pm, uye iwe uchadzora kushushikana kwako, kudzikisa mhedzisiro yekuneta, uye kuwedzera huwandu hwemabasa akakosha anokuchengetedza iwe kubudirira.
Chekupedzisira, ndizvo sainzi! Mushure mezuva rinobudirira uye kurara kukuru kwehusiku, huropi hwemunhu hune mwero wakakwira we dopamine. Dopamine ikomboni inovandudza kukurudzira, inogona kuwedzera simba, uye nekuvandudza kufunga kwakasimba. Paunopedza mabasa makuru, huropi hwako zvakare hunogadzira yakawedzera norepinephrine, chinhu chechisikigo chinowedzera kutarisisa, kuwedzera kugadzirwa uye kudzikisira kushushikana. Kana iwe uchinetseka kuzvipira kune chirongwa zuva rese, uye uchishanda kusvika pakati pehusiku uchikanganisa kurara kwako, iwe ungangodaro uchimuka une husimbe uye usingafarire. Chengetedza dopemine yako kudzora kurudziro yako!
Usaedzwa - ripa basa rako rakaoma nekutarisa vezvenhau uye email mushure mekunge wapedza neako mangwanani chirongwa kana mapurojekiti. Iwe unozoshamiswa nekukura kwemazuva ako!
Tsanangura Zviitiko Zvako
Ini ndaiwanzo kufunga-kekufungidzira kuti ndasvika sei kumabasa makuru. Ini ndinotanga nezvinangwa, ndogadzira mepu yekuzadzisa izvo zvinangwa, ndobva ndatanga kushanda padanho rega. Sezvo ini ndichishanda nevatengi, ini ndinogaro tariswa kushamisika pane kwavo kutarisisa kana kunetsekana kwatisiri kutoshanda parizvino. Ndiri kunetsekana neChitatu 1, ivo vari kubvunza nezve Nhanho 14. Ndiri kugara ndichidzosera vatengi vangu kutarisa kumashure kune iro basa riripo. Izvi hazvireve kuti hatisi vanonetsekana, tiri kugara tichiongorora zano redu zvine chekuita nezvinangwa nekugadzirisa zvinoenderana.
Ndezvipi zvinangwa zvako? Zvinowirirana nezvinangwa zvesangano rako here? Ko zvinangwa zvako zvichaendesa kumberi chiratidzo chako here? Basa rako? Yako mari kana mari? Kutanga nezvinangwa zvako mupfungwa uye kudoma iwo mabasa ekurova iwo matanho makuru kunounza kujekesa kuzuva rako rebasa. Gore rino rapfuura, ndakacheka kudyidzana kwakakosha, zviitiko zvakakosha, uye kunyange vatengi vanobhadhara zvakanyanya pandakaona kuti vaindivhiringidza kubva kune angu marefu-nguva zvibodzwa. Zvakaoma kuva nehurukuro idzodzo nevanhu, asi zvakakosha kana uchida kubudirira.
Saka, tsanangura matanho ako makuru, ziva mabasa anozokusvitsa ipapo, uone zvinokanganisa zviri kukumisa, uye uwane kurangwa pakuchengeta kune yako tenzi chirongwa! Paunenge uine kujekeserwa kuti nei urikuita zvauri kuita mazuva ese, iwe unowedzera kukurudzira uye hauna kushushikana.
Shandura Zvese Zvaunodzokorora
Ini ndinozvidza kuita chimwe chinhu kaviri, ndinonyatsoita. Heino muenzaniso… munguva yehupenyu hwekushanda nemumwe wevatengi vangu, ini ndinowanzo pedza nguva ndichishanda pamwe nevashandi vavo vemukati vekushandura pane yekutsvaga injini. Panzvimbo pekugadzira mharidzo nguva dzese, ini ndine zvinyorwa zvishoma zvandinoramba ndichifunga pane yangu saiti izvo zvavanogona kureva. Zvinogona kutora mazuva, kazhinji zvinongotora awa kana kupfuura nekuti ini ndanyora zvakadzama zvinhu kwavari kuti vataure nezvazvo.
Matemplate ishamwari yako! Ndine matemplate ekupindurwa emhinduro dzeemail, ini ndine matemplate ekuratidzira saka ini handifanire kutanga kutsva pane yega yega mharidzo, ndine mafambisirwo matemplate ekubata kwese kwandinoshanda nako Ini ndinotove neakakosha uye mapurojekiti matemplate akavakirwa kunze kwevatengi saiti kuvhurwa uye optimization. Kwete chete iyo inondichengetera imwe yenguva yenguva, zvakare inova zvirinani nevatengi vese ini ndichienderera mberi ndichivandudza ivo nekufamba kwenguva.
Ehe, matemplate anotora imwe yekuwedzera nguva kumberi… asi ivo vanokuisira mari yakawanda pasi pemugwagwa. Aya ndiwo maratidziro atinoita masayiti futi, tichiavandudza iwo aine tarisiro yekuti iwe uchaita shanduko dzakakura svondo rinotevera. Nekuita iro repamberi basa, shanduko dzezasi dzinotora yakawanda shoma nguva uye kushanda nesimba.
Imwe nzira yetemplatized yatinoshandisa kuronga vatengi vedu 'midhiya midhiya. Isu tinowanzo kuunganidza zvidzoreso, tinozvifananidza nekarenda, uye tinofungidzira gore rese rekushandurwa kwevateveri vavo kuti vazeye. Zvinongotora zuva kana kudaro - uye vatengi vedu vanoshamisika kuti isu tangotora gore rekushamisika kuti chii chavanozotumira pazita ravo. PS: Tinoda mutsigiri wedu Agorapulse's sarudzo dzekumisidzana uye kuronga magadziriso eruzhinji!
Uraya Hafu Yemisangano Yako
Mishumo yakawanda yakaratidza kuti inopfuura makumi mashanu muzana yemisangano haina basa. Tarisa tarisa patafura nguva inotevera paunenge uri mumusangano, funga nezvekuti imarii irikushandiswa pamusangano iwoyo mumihoro, wobva watarisa mhedzisiro. Zvakanga zvakakodzera here? Kazhinji.
Iwo akanakisa emabasa ehunyanzvi haana kumbogadzirwa mumusangano, vanhu. Ndine urombo asi kubatana pamapurojekiti ekushambadzira zvinongoguma mune yakaderera yakajairika dhinomineta. Iwe wakahaya nyanzvi kuti basa riitwe, saka govana uye ukunde. Ini ndinogona kunge ndine gumi nemaviri zviwanikwa zvinoshanda pane imwecheteyo projekiti - yakawanda panguva imwe chete - uye kashoma pandinovawana ivo vese pane imwecheteyo kufona kana mukamuri imwechete. Isu tinogadzira chiono, tobva tabvisa zviwanikwa zvakakosha kuti tisvike ipapo, tichitungamira traffic kuti ideredze mabonderana.
Kana iwe uchitarisirwa kuenda kumusangano, heano mazano angu:
Bvuma chete kokero yemusangano kana munhu ari kukukoka akatsanangura nei vachida kuti iwe upinde. Ini ndaishanda pakambani hombe kwandaienda kubva kumisangano makumi mana pasvondo kusvika pa40 chete pandakaudza vanhu kuti handikwanise kuenda kunze kwekunge vatsanangura chikonzero.
Gamuchira chete misangano ine ajenda yakatsanangurwa ne chinangwa chemusangano uye nguva dzechikamu chimwe nechimwe yemusangano. Iyi nzira inouraya tani yemisangano - kunyanya yakadzokororwa misangano.
Gamuchira chete misangano nemurongi wemisangano, muchengeti wemusangano, uye wezvaiitika musangano. Murongi anoda kuchengetedza chikamu chega chega chemusangano pamusoro wenyaya, muchengeti wenguva anochengeta musangano nenguva, uye wezvaiitika anogovera zvinyorwa nezvirongwa zvekuita.
Gamuchira chete misangano inopera nehurongwa hwekuita hwekuti ndiani achange achiita chii, uye vachazviita riini. Uye wozoita kuti vanhu ivavo vazvidavirire - kudzoka pamusangano wako wekudyara kunoenderana nekugona kwavo kupedzisa zviitwa zvekukurumidza. Dzivisa timu-yakavakirwa zviito zvinhu… kana munhu asina rake basa, hazviitwe.
Kana makumi mashanu muzana yemisangano iri kutambisa nguva, chii chichaitika kune rako rebasa vhiki kana iwe uchiramba kuenda hafu yacho?
Outsource Izvo Zvaunoyamwa Pa
Iyo nguva inotora kuti uzvidzidzise iwe pachako maitiro ekuita chimwe chinhu kana kunetsa nyaya iwe yausingazive nayo haisi yekungoparadza yako kugadzirwa, irikudhura iwe kana kambani yako mari yakawanda. Kana iwe uri muzvinabhizimusi, iwe unoita mari paunenge uchiita izvo zvaunofanirwa kuita. Zvese zvimwe zvinhu zvinofanirwa kubuditswa kunze nevakabatana. Ndine akawanda emakondirakiti andinosheedzera kune zvese kubva kumusoro wekupikisa, kuvaka maemail anoteerera, kutsvagisa yedu inotevera infographic. Mapoka andakaisa pamwechete ndiwo akanakisa, anobhadharwa zvakanaka, uye haambondirasise. Zvinotorwa makore gumi kuvaunganidza, asi zvave zvakakodzera nekuti ini ndinosvika pakuisa pfungwa dzangu pane izvo zvinoita kuti bhizinesi rangu rimhanye zvakanaka.
Vhiki rino, semuenzaniso, mutengi akauya kwandiri nenyaya yavainge vachishanda nayo kwemwedzi. Dare rekuvandudza rakanga rapedza mwedzi richishanda pakuvaka system uye ivo vaive vava kuudza muridzi webhizinesi kuti zvaizotora mwedzi yakati wandei kuti igadzirise. Nekuti ini ndaiziva nekubatanidzwa kwavo uye nyanzvi muindastiri, ndaiziva kuti taigona kupa rezinesi kodhi kune zvishoma zvishoma. Kwemazana mashoma emadhora, chikuva chavo chave kunyatso kubatanidzwa… uye nerutsigiro uye kukwidziridzwa. Iye zvino boka ravo rekuvandudza rinogona kusunungurwa kuti rishande pazvinhu zvepuratifomu.
Chii chiri kutora iwe nguva yakareba kuti upedze? Ndiani aigona kukubatsira? Ratidza nzira yekuvabhadhara uye iwe unofara iwe wakazviita!
Tags: unganidza wongororozvinhumuchina wekuburitsascalenzwisiso yemagariro
Aug 10, 2009 na8: 02 PM
Kutenda nezano rakakura paTungle. Ndanga ndichiishandisa mazuva mashoma izvozvi uye zvakanakisa! Ini ndinoshanda kubva kumatanhatu manomwe akasiyana eGoogle makarenda eangu biz, mhuri, chikoro, chechi, HOA nemamwe masangano uye ini ndinowana akawanda mafoni, maemail neSMS kune vanhu vanoda kuziva kana ini ndiripo kusangana. Sezvo ini ndinoburitsa izwi kune izvi zvese rinofanirwa kuve rakakura nguva saver kwandiri uye netariro ivo.
BTW - pane Ning app yeiyi asi ine bhagi mariri iro iro Tungle tech vakomana vari kushanda parizvino. Vanoti ichagadziriswa mumazuva mashoma.
Aug 10, 2009 na11: 06 PM
Kutenda nekudanidzira, Doug! Tango rave chishandiso chikuru kwandiri uye ndinofara kuti unorifarira, futi. Ndinotarisira kusangana kwedu 🙂
Aug 27, 2009 pa 3: 09 AM
Ndatenda nekutaura Tungle kwandiri. Zvinonzwika sebasa rakakura uye ndanzwa vanhu vakati wandei vachigovana zviitiko zvavo zvakanaka nechombo. Zvinoita sekunge ndinofanira kuedza.